Ny fahorian’ny sasany no fifalian’ny hafa | 102 KARA
Ny fahorian’ny sasany no fifalian’ny hafa
Raharaha ihany ity fiainana ity, hoy ny filazan’ny maro.
Hevero ange fa fahavoazana iray lavaka ( hoy ny fitenenana ) no nahazo ny mpamboly rehefa mandalo ny andiam-balala. Ao anatin’ny indray andro fotsiny, dia tapitra ripaka avokoa ny voly (ny vary ohatra rehefa matoy ka miandry fijinjana), sy ny voly hafa ihany koa..
Nandripaka tokoa ary ny andiam-balala tany amin’ny faritra atsimon’Antsirabe iny ary dia valalaniny sy vala-ketraka ny mpamboly tamin’izany.
Etsy anilan’izany kosa anefa teo atsinanantsena Asabotsy ao Antsirabe dia ramatoa maromaro no mivarotra ny valala. Tsy mila miantsoantso mpividy akory izy ireo amin’izany, fa ny mpividy no mifandrombaka, satria mba mora ny vidin’ny valala, ary efa tsy ho takatra koa ny vidin’ny hena. 300 ariary no ivarotany ny iray vilia madinidinika. Milaza ireo mpanjifa fa matsiro sy mikarepoka ireto valala ireto ka tena mahasolo laoka vary mihintsy. Koa tsy nahagaga raha lava tokoa ny filaharana hividy valala.
Tsy nisy tompon’andraikitra nanakana izany fivarotam-balala izany ihany koa moa, satria araka ny fantatra avy amin’ny teknisianina, dia tsy misy atahorana akory ny fihinanana ireo valala ireo satria mbola tsy nisy hatramin’izao ny fandrarahana fanafody simika amonoana azy ireny.
Koa izany no ilazana hoe : » dia ny fahorian’ny sasany tokoa no fifalian’ny sasany «
1 août 2013 - 19 h 06 min Economie 1268 vues